Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Hawaii dia mitatitra ny fipoahan'ny volkano vaovao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hita • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Fipoahan'ny volkano Hawaii
Tamin'ny 3 ora tolak'andro tokony ho tamin'ny 20 ora tolakandro Hawaii (HST) androany alarobia 29 septambra 2021 dia nanomboka ny fipoahana tao amin'ny lava-bolan'ny Halemaʻumaʻu tao amin'ny kalavo tampon'ny Kīlauea, tao amin'ny valan-javaboary volkano Hawai'i.
Nisokatra ny fisidinana ao anaty ny lava lava ao amin'ny lava-bato eo atsinanana ary miteraka fikorianan'ny lava amin'ny ambonin'ny farihy.
Nisy vavahady hafa nosokafana tamin'ny 4 ora sasany teo ho eo androany teo amin'ny rindrina andrefan'ny vava hadin'i Halemaʻumaʻu.
Ny Hawaiian Volcano Observatory dia nampiakatra ny ambaratonga fampandrenesana hatramin'ny volomboasary ka hatrany amin'ny mena, midika izany fa eo am-panolorana torohevitra iray izao ny fipoahan'ny volkano.
Nisokatra atsinanana atsinanan'ny nosy lehibe ao anatin'ny farihy lava izay niasan'ny Kawahin'i Halemaʻumaʻu manomboka ny volana desambra 2020 ka hatramin'ny may 2021, ary mamoaka mikoriana lava eo ambonin'ny farihy lava izy ireo.
Tamin'ny 4 ora sy sasany hariva teo ho eo, HST dia nisy varavarankely hafa nisokatra teo amin'ny rindrina andrefan'ny vava hadin'i Halemaʻumaʻu.
Ny Hawaiian Volcano Observatory dia nandefa sary lava tamin'ny 3:40 hariva tao an-kavoana, taoriana kelin'ny nampiakarana ny ambaratonga fampandrenesana ho an'ny volkano ho famantaranandro avy amin'ny mpanolotsaina iray.
Araka ny lazain'ny Observatory Volkano Hawaii, io tolakandro io dia nitondra fiovan'ny tany sy hetsika fitabatabana. Ny fampandrenesana ambaratonga dia natsangana tamin'ny volomboasary ka hatramin'ny mena (fampitandremana) tokony ho tamin'ny 4:00 hariva Manodidina ny horohoron-tany 17 no noraketin'ny US Geological Survey (USGS) tamin'ny haben'ny 2.5-2.9 nandritra ny 24 ora farany.
Noho ny fipoahan'ny fipoahana tanteraka ao anatin'ny lava-bolon'i Halemaʻumaʻu, dia tsy misy atahorana ireo faritra onenan'olona ankehitriny. Hanara-maso ny hetsika sy ny loza mety hitranga ny tompon'andraikitra raha mitohy ny fipoahana.
Hawaii Shira dia nizara tao amin'ny twitter adiny iray mahery teo ho eo izay: Nilaza ny zanako lahy fa nahatsikaritra fitomboan'ny fofona solifara dioksida rehefa nandeha naka ny zanany lahy tao amin'ny Volkano Charter School izy io tolakandro io.
Ny fotoana nipoahan'ny Kilauea farany dia ny nanombohany tamin'ny Desambra 2020. Nanohy ny famaohana lava hatramin'ny Mey 2021. Io fipoahana io dia namorona farihy lava vaovao teo an-tampon'ny lava-bato.
Nandritra ny fotoana niasana farany azy dia namokatra lava 41 tapitrisa metatra toratelo, na galona 11 tapitrisa, i Kilauea nandritra ireo 157 andro nipoahany tsy tapaka.
Lava dia nilatsaka avy tao amin'io faritra io ihany in 2018 rehefa nipoaka i Kilauea tao amin'ny iray amin'ireo faritra iva misy azy. Io fipoahana io no lehibe indrindra voarakitra hatreto amin'ny volkano. Simba tanteraka ny trano ary olona an'arivony no namindra toerana.